Hiri: imwe yeakanakisa akawanda multiplatform email vatengi | Linux Vakapindwa muropa
Hiri: imwe yeakanakisa akawanda multiplatform email vatengi
Kunyange zvakadaro hiri Icho chirongwa chisina basa parizvino, ichiri mune akawanda marekodhi eiyo distros, uye kuchine vashoma vashoma vevashandisi vanoramba vachishandisa. Iyo email mutengi inoisa pfungwa pakuva nepakati software, yakanakira nzvimbo dzebasa, sezvo ichigona kuronga zvese kutumira nekutambira maemail, kubata karenda yako, vanobatika, uye mabasa.
Uku kuvandudzwa inzira yakanaka yezvishandiso zvakadai se Microsoft Outlook. Uye, kunyangwe ichisiiwa, chokwadi ndechekuti chirongwa chakange chichiitwa kusvika nguva pfupi yadarika, kusvika Nyamavhuvhu 2018, saka hachina kupera nguva maererano nemabasa.
Zvakare, Hiri ari multiplatform software, zvichibva pane Qt chimiro, uye izvo zvinogona kumhanyisa pane ese macOS, Windows, uye Linux futi. Ehezve, yakavhurika sosi, yemahara, uye inoshandisa Microsoft Exchange Server zvivakwa, saka inogona kuve huru sarudzo kune avo vanoida. Ehe, haitsigire iyo IMAP protocol.
Nezve avo inonyanya kukosha maficha, chii chimwe:
Bvumirana uchishandisa Microsoft EWS API (Chinjana Webhu Server)
Inoenderana neShanduro 2010 SP2 + uye Hofisi 365
Pedzisa karenda yebasa rako uye zviyeuchidzo.
Dhatabhesi yekutarisira maemail munharaunda neSQLite, kugona kuwana maemail nyore.
Chinjana Global Kero Rondedzero (GAL).
Yakabatanidzwa maneja maneja, kuti iwe ugone kuita rako rese basa kurongeka uye usakanganwa kuita chero chinhu.
Dhairekita maneja kurongedza zvese.
OAuth 2.0 kuvimbiswa, kune chengetedzo huru.
Saka kana uri kubata basa uye urikushandisa aya maakaunzi, zvingangoita kuti Hiri anogona kukubatsira zuva nezuva zuva ne chirongwa ichi. Uye zvakare, iwe unogona kuiwana muzvitoro zveapp yewaunofarira distro, kana kurodha pasi snap package zvakananga kubva kune yepamutemo webhusaiti yandakabatanidza muiyi link. Naizvozvo, hauzove nematambudziko ekuti ive yakagadzirira mune mashoma mashoma kudzvanya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Hiri: imwe yeakanakisa akawanda multiplatform email vatengi
chikuru ndanga ndisingachizive asi nezvose zvataurwa ndave kutodonha zvakanaka
ha ha ha «conosia» uye «kudonha» zvakanaka kwazvo!
Pindura kune lepro
chirongwa chakakura chakasiiwa akadaro
Chirongwa chakasiiwa hachigone kuve chimwe cheakanakisa parizvino zvisinei nekuti angave akawanda sei. Ini ndinonzwa kunyara newe nekuda kwekuve nemabhora ekurudzira chirongwa chakasiiwa chisingareve chinhu kunze kwegazillion bugs dzekushandisa nevanobira. Varume vane hushingi kurudziro huru.
Pindura kune Akasiiwa Big Project
Kudzoreredza bhuku rekare rekare naDebian uye Raspberry Desktop
Kodi 19 Matrix inouya nerutsigiro rweAV1, Python 3 uye izvi zvimwe zvinhu zvitsva, asi kuvhurwa hakusi pamutemo izvozvi